Madaxweynihii ugu horreeyay ee Email diray | WAJAALE NEWS
March 13, 2019 - Written by Reporter:
Waxaan halkan kusoo qaadaneynaa qaar yar oo ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee isticmaalay adeeggan mar magaciisa loogu yeedhi jiray waddadii ugu cajiibsaneyd ee macluumaadka.
Al Gore ayaa qoraal uu 12-kii bishan soo dhigay bartiisa Twitterka ku yidhi: “Sannadkii 1991-kii, xeerkii bandhigga sare ee Kumbuyuutarrada wuxuu waddada u xaadhay adeegga loogu yeedhi jiray “Waddada cajiibka ah ee macluumaadka”. Waxaan ku faanayay inaan qoro sharcigaas isla markaana ku caawiyo dadka internet-ka taageera inay helaan dimuqraadiyad xor ah, taasoo ah darajo aan ku khasbannahay inaan ilaalinno”.
Dhowr sano ka dib, sannadkii 1994-kii, madaxwynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo ra’iisal wasaarihii xilligaas ee dalka Sweden Carl Bildt ayaa noqday hoggaamiyeyaashii dunida ee markii ugu horreysay Email isugu diray adeegga (world wide web).
Mr Clinton ayaa qoraal uu isaguna shalay oo Salaaso ahayd soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yidhi: “Sannadkii 1994-kii, waxaan ku faanayay inaan noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee diray farriin Email ah oo ku socotay mas’uul kale oo dowladeed, Carl Bildt, oo ahaa ra’iisal wasaarihii xilligaas ee dalka Sweden. Farriinta aan u diray markaas waxaan uga mahad celiyay sida ay xukuumaddiisa u garab istaagtay Mareykanka oo soo afjaray cunaqabateyntii dhinaca ganacsiga ee saarneyd Vietnam”.
3:00 PM – Mar 12, 2019
Markii la gaadhay sannadkii 2000, hay’add cilmi baadhis sameysa oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa daraasad ay sameysay ku ogaatay in kala badh ka mid ah bulshada ay isticmaalayeen adeeggan ayna farriimo isugu dirayeen si toos ah.
Suurta gal ma aha in la illoobo shanqadhii ugu horreysay ee ay dadku maqlayeen marka ay farriimaha loo soo diray soo gaadhaan ama ay farriimahoodu baxaan.